Somaliland: Nuxurka Khudbad Madaxweyne Siilaanyo ka jeediyey Xuska 23-guurada Ciidanka Qaranka - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Nuxurka Khudbad Madaxweyne Siilaanyo ka jeediyey Xuska 23-guurada Ciidanka Qaranka
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Axmed Maxamed Silaanyo Waxa uu maanta oo ay taariikhdu tahay 02.02.2017 ka qaybgalay , munaasibadda Xuska Sannad Guurada 23aad, ee Aasaaska Ciidanka Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo lagu qabtay Caasimada Hargeysa. Madaxweynaha oo khudbad taariikhi ah ka jeediyey munaasibadaasi ayaa u dhignayd sidan:-
1. Waxaannu kordhinnay, muddadii lixda sanno ahayd tirada ciidammada, iyada oo la qarameeyey, lana hawlgeliyey colal iyo cutubyo badan oo cusub.
2. Waxaannu kor u qaadanay, tayada iyo tababarrada xirfadaha ciidanka.
3. Waxannu keennay agab fara badan oo isugu jira gaadiid iyo hub, kaas oo kobciyey awooddii iyo mooraalkii ciidammada.
4. Ciidankii aan kala lahayn sarkaal iyo subbeehi, muddada ku siman labaatanka sannadood, waxaannu mid kasta siinnay derajadii uu mudnaa, taas oo loo maamulay hab cadaalad iyo cilmi ku dhisan.
5. Waxaannu tiraba saddex jeer kordhinnay mushaharka ciidammada Qaranka.
6. Dhinaca kale, waxaannu u samaynay ciidammada jiidda hore, gunno gaar ah, oo lagu daryeelayo ama lagu xannaanaynayo, taas oo aad maanta dhexdiinna uga taqaannaan “GUNNADA GEED FUULKA”.
Sanad Guuradii Ciidanka Qaranka Ee 23